Digniin xoogan laga bixiyey in Al-Shabaab qaraxyo ka geystaan wadanka Kenya – SBC
Digniin xoogan laga bixiyey in Al-Shabaab qaraxyo ka geystaan wadanka Kenya
Posted by editor on Apriil 21, 2011 Comments
Digniin cusub oo ay soo saareen Taliska Booliiska Kenya ayay ku muujiyeen suurtagalnimada weeraro qaraxyo oo ay ka geystaan wadanka Kenya xarakada Al-Shabaab inta lagu gudajiro dabaaldega dadka Kirishtanka sameeyeeyaan bishan April todobadkan oo kale ee loo yaqaan Easter.
Matthew Iteere oo sarkaal ka tirsan ciidamada Booliiska Kenya ayaa digniin uu caawa soo saarey wuxuu uga digay dadweynaha wadanka Kenya inay jiraan weeraro qorsheysan oo Al-xoogaga Shabaabku ka fuliyaan goobaha lagu badan yahay ee dalka Kenya, isagoo xusey inay heleen xog arinkaasi ku aadan oo dhanka mukhaabaraadka la xiriirta.
“Waxaan doonaynaa inaan ku wargalino dadka shacabka ah inaan helnay warar sirdoon oo muujinaya qorehe Al-Shabaab ay ku bartilmaameysanayso goobaha lagu badan yahay, iyadoo ay jirto ay hanjabaad ay amuurahaasi ku muujiyeen” ayuu hadalkiisa ku darey Matthew Iteere.
Iteere ma aanu xusin magacyada ama goobaha weerarada lala maagan yahay , laakiin wuxuu sheegay in ay bartilmaameed yihiin goobaha laga dukaamaysto, Kaniisadaha, xarumaha dawlada & waliba goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ah. “Waxaan jeclahay inaan u xaqiijiyo dadka shacabka ah inaan qaadnay talaabooyin xoojin dhanka amaanka ah, isla markaana aynu sameyn doono hawlgalo rondo ah si aan u xaqiijinayo amaanka dadka” ayuu yiri sarkaalkan.
Bishii February ee sanadkan xarakada Al Shabaab waxay u jeediyeen dawlada Kenya hanjabaad xoogan oo ah inay weeraro ka geysan doonaan gudaha wadanka Kenya, iyadoo taasi ay hareer socotey qaraxyo ruxay magaalada Kambala ee caasimada wadanka Ugandha bishii July ee sanadkii hore kuwaasi oo ay ku dhinteen 79 qof.